यी युवा पक्राउ पर्नुको कारण यस्तो छ, यिनले कुकुरको जिउमा कसको टाउको जोडे त? हेर्नुहोस – TAJA KHAWAR
November 7, 2018 Taja Khawar समाज 0
काभ्रे । देशमा निर्मला काण्ड एक सय दिन नाघिसक्यो, अन्य थाती बसेका केस कहाँ पुगे पुगे? ३३ किलो सुन कुन खान नपाएकाकको पेटमा झ्वाम्म भयो? साँझ १० बजे पछि चाड मान्न नपाइने कायर प्रशासनको उक्ति छ, देशमा महङ्गी, लुट, चोरी र भ्रस्टौ भ्रष्टले आतंक फैलिएको छ। यहा भने ठुलै अपराध गरे जसरीजसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर बिगारेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने एकजना प्रक्राउ परेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ ।
समाचारका अनुसार कुकुरको जिउमा प्रधानमन्त्रीको टाउको जोडेर सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गरेपछि पक्राउ परेका हुन् । उक्त ब्यक्तिलाई मण्डनदेउपुर नगरपालिका देउपुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । के विकसित देशका नेताहरुको ट्रोल देख्ने गरेका छैनन कि कसो? सक्दो सेयर गर्नुहोला ।